Limitations to free expression — လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခြင်း၏ ကန့်သတ်ချက်များ – Free Expression Myanmar
All limitations on free expression must meet three requirements:
The restrictions must be set out in law.
The restriction should pursue only one of the following interests: to ensure respect of the rights or reputation of others or to protect of national security, public order, public health or public morals.
Any restriction on the right to freedom of expression be necessary for the protection of the rights of others or the other legitimate interests.
Furthermore, international courts have set out few qualitative requirements that the state must demonstrate that:
The restriction is in response toapressing social need, not merely convenience or usefulness.
If there exists an alternative measure which would accomplish the same goal inaway less intrusive to the right to freedom of expression, the chosen measure is not in fact “necessary”.
The impact of restriction must be proportionate, meaning that the harm to freedom of expression caused by the restriction must not outweigh its benefits to the interest it is directed at.
လွပ်လပ်စွာပြောဆိုခြင်းအပေါ်ရှိ ကန့်သတ်မှုများအားလုံးသည် လိုအပ်ချက် (၃)ခုဖြင့် ကိုက်ညီ်ရ မည်ဟု ဆိုလိုသည်။
၁။ကန့်သတ်မှုများကို ဥပဒေဘောင်အတွင်း ချမှတ်ရမည်။
၂။ ကန့်သတ်မှုကို အောက်ပါ အကျိုးများမှ တစ်ခုအတွက်သာ ကြိုးပမ်းသင့်သည်။ _
အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားရန် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော် လုံ ခြုံရေး၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး၊ လူထုကျန်းမာရေး (သို့မဟုတ်) လူ့ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများကို အကာ အကွယ်ပြုအာမခံချက်ပေးနိုင်ရန်။
၃။အခြားသူများ၏အခွင့်အရေးများအား ကာကွယ်ခြင်းအတွက် (သို့မဟုတ်) ဥပဒေက ခွင့်ပြု ထားသောအခြားအကျိုးကျေးဇူးများအတွက် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအား ကန့် သတ်သည့် မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မဆို။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတကာတရားရုံးများမှ အရေအတွက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပြီး ဖြစ် သည်။ ယင်းမှာ _
၁။ ကန့်သတ်ခြင်းသည် လူမှုအခြေခံလိုအပ်ချက်၏ဖိအားကိုတုံ့ပြန်မှုပင်ဖြစ်သည်။ အဆင်ပြေရုံ၊ အသုံးကျရုံသက်သက်မျှသာမဟုတ်ပေ
၂။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို မသိမသာနည်းလမ်းဖြင့် တူညီသောလိုရင်းကိုပဲ ရောက်ရှိပြည့်စုံစေမည့် တခြားရွေးချယ်စရာ ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုခုရှိလျှင် ရွေးချယ်ထား ပြီးသား ဆောင်ရွက်ချက်သည် အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ ။
၃။ကန့်သတ်တားဆီးခြင်းသည်အချိုးအစားကျရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာကန့်သတ်ခြင်းကြောင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်းအပေါ်တွင်ဖြစ်လာမည့်ဘေးအန္တရာယ်သည် ရရှိလာမည့်အကျိုးတရားထက်မပိုစေရ။